KEDU IHE MERE Ị NA-EJI KPOO DISKI IKE MPỤGA? IHE Ị GA-EME - DISK - 2019
Ka ọ dị ugbu a, nyefe fim, egwuregwu na faịlụ ndị ọzọ. Ọtụtụ ihe dị mfe na draịvụ ike mpụga karịa na draịvụl ma ọ bụ DVD diski. Mbụ, ọsọ ọsọ ahụ na HDD mpụga dị elu (site na 30-40 MB / s megide 10 MB / s na DVD). Nke abuo, ọ ga-ekwe omume ịdekọ na ihichapu ozi na diski ike dịka ọchọrọ ma mee ya ngwa ngwa karịa otu DVD diski. Nke atọ, n'elu HDD na-apụ apụ, i nwere ike ịfe ọtụtụ iri na narị narị faịlụ dị iche iche ozugbo. Ikike nke ihe mgbochi nke taa na-eru 2-6 TB, obere obere ha na-enye gị ohere ịnyefe ọbụna n'akpa uwe.
Otú ọ dị, mgbe ụfọdụ, ọ na-eme na draịvụ ike mpụga amalite ịkụda. Ozokwa, mgbe ufodu, o nweghi ezi ihe kpatara ya: ha adighi akwatu ya, ha adighi aka ya, ha adighi etinye ya n'ime mmiri, wdg. Gini ka ime n'okwu a? Ka anyị gbalịa ịtụle ihe niile kachasị akpata na ngwọta ha.
Ọ dị mkpa! Tupu ị dee banyere ihe kpatara diski ahụ ji egbusi ngwa ngwa, m ga-achọ ikwu okwu ole na ole gbasara ọsọ na ịde ihe site na HDD. Ozugbo na ihe atụ.
Mgbe ị na-ede otu faịlụ buru ibu - ọsọ ahụ ga-adị elu karịa ma ọ bụrụ na i depụta ọtụtụ obere faịlụ. Dịka ọmụmaatụ: mgbe ị na-edegharị faịlụ ọ bụla AVI nwere ihe dị ka 2-3 GB na Ọganihu Seagate 1TB USB3.0 diski - ọsọ bụ ~ 20 MB / s, ọ bụrụ na i detuo otu narị foto JPG - ọsọ na-adaba na 2-3 MB / s. Ya mere, tupu i detuo ọtụtụ narị ihe oyiyi, kpọbata ha n'ime nchekwa (wee nyefee ha na disk ọzọ.) N'okwu a, diski agaghị akwụsịlata.
Ebumnuche # 1 - disk defragmentation + usoro faịlụ enweghi oru maka ogologo oge
N'oge OS Windows nwere faịlụ na diski abụghị mgbe niile otu "ibe" n'otu ebe. N'ihi ya, iji nweta otu faịlụ, ị ga-ebu ụzọ gụọ akụkụ ndị a niile - ya bụ, na-etinyekwu oge n'ịgụ faịlụ ahụ. Ọ bụrụ na enwere ọtụtụ "iberibe" ndị dị otú ahụ "gbasasịrị" na diski gị, ọsọ nke diski na PC dịka dum dara. A na-akpọ usoro a fragmentation (n'eziokwu, nke a abụghị eziokwu, mana iji mee ka ọ pụta ìhè ọbụna ndị ọrụ ndị ọzọ, a kọwara ihe niile na asụsụ dị mfe nghọta).
Iji dozie ọnọdụ a, a na - emegharị arụmọrụ - ịkpaghasị. Tupu ịmalite ya, ịkwesịrị ikpochapụ diski diski nke irighiri ihe (faịlụ na-adịghị mkpa na nke nwa oge), mechie ngwa niile chọrọ (egwuregwu, iyi, ihe nkiri, wdg).
Kedu otu esi agba ọsọ na Windows 7/8?
1. Gaa na kọmputa m (ma ọ bụ kọmputa a, dabere na OS).
2. Pịa aka nri na diski chọrọ ma gaa na njirimara ya.
3. Na njirimara, mepee taabụ ọrụ wee pịa bọtịnụ kachasị elu.
Windows 8 - Njikarịcha Disk.
4. Na mpio nke gosipụtara, Windows ga-agwa gị banyere ogo nke nkwekọrịta diski, ma ọ dị mkpa ka a gafee ya.
Nyochawa nke nkenke nke diski ike na-apụ.
Usoro faịlụ nwere mmetụta dị ịrịba ama na mkpirisi (nwere ike ịlele na disk diski). Dịka ọmụmaatụ, usoro faili FAT 32 (na-ewu ewu), ọ bụ ezie na ọ na-arụ ọrụ ngwa ngwa karịa NTFS (ọ bụghị ihe dị ukwuu, mana ka), na-enwe ike iwepụ ya. Tụkwasị na nke ahụ, ọ gaghị ekwe ka faịlụ na diski karịa 4 GB.
Olee otú iji tọghata FAT 32 faịlụ usoro na NTFS:
Ebumnuche nke abuo 2 - ezi uche ezighi ezi, bedy
Na n'ozuzu, ịnweghị ike ịkọ nkọ maka njehie na diski ahụ, ha nwere ike ịchọta ruo ogologo oge n'enyeghị ihe ọ bụla. Njehie ndị dị otú ahụ na-emekarị n'ihi enweghị njikwa nke mmemme dịgasị iche iche, ọgba aghara nke ndị ọkwọ ụgbọala, nkwụsị ike ike (dịka ọmụmaatụ, mgbe ọkụ agbanyụrụ), na kpofụ kọmputa mgbe ọ na-arụ ọrụ siri ike na diski ike. Site n'ụzọ, Windows onwe ya n'ọtụtụ ọnọdụ mgbe nlọghachị malitere ịchọta diski maka njehie (ọtụtụ ndị hụrụ nke a mgbe a gbasịrị ike).
Ọ bụrụ na kọmputa ahụ mgbe njedebe nke ike na-azaghachi ịmalite, na-enye ihe ngebichi ojii na njehie, ana m akwado iji ndụmọdụ ndị dị n'isiokwu a:
Maka diski ike dị na ya, ọ ka mma ịlele ya maka njehie n'okpuru Windows:
1) Iji mee nke a, gaa na kọmputa m, wee pịa nri na aka ya ma gaa na ya.
2) Nke ọzọ, na taabụ ọrụ, họrọ ọrụ iji lelee disk maka njehie faịlụ.
3) Ọ bụrụ na kọmputa ahụ gwụla mgbe ị mepee aha taabụ nke diski ike diski, ị nwere ike ịmalite windo diski site na akara iwu ahụ. Iji mee nke a, pịa nchikọta nsonye WIN + R, wee tinye iwu CMD wee pịa Tinye.
4) Ka ịlele disk ahụ, ịkwesịrị ịbanye iwu nke ụdị: CHKDSK G: / F / R, ebe G: bụ akwụkwọ edemede; / F / R na-emezighị emezi iji dozie njehie niile.
Okwu ole na ole banyere Badam.
Ụkwụ - nke a abụghị mpaghara a na-agbanwe agbanwe na disk diski (sụgharịrị site na Bekee). Mgbe ọtụtụ n'ime ha dị na diski ahụ, usoro faịlụ agaghịzi enwe ike ịtọhapụ ha na-enweghị emetụta arụmọrụ (na ọrụ dum disk).
Otu esi achọpụta ihe omume disk Victoria (otu kachasị ụdị ya) ma gbalịa iweghachi diski ahụ ka a kọwara n'isiokwu na-esonụ:
Ihe kpatara ihe nke 3 - ọtụtụ mmemme na-arụ ọrụ na disk na ọnọdụ ọrụ
Ugboro ugboro ihe mere enwere ike igbochi disk ahụ (ma ọ bụghị naanị mpụga) bụ nnukwu ibu. Dịka ọmụmaatụ, ị na-ebudata ọtụtụ iyi na disk + nke a, lelee fim si na ya + lelee diski maka nje. Chee ibu na disk? Ọ bụghị ihe mgbagwoju na ọ na-amalite ịda mbà, karịsịa ma ọ bụrụ na anyị na-ekwu okwu gbasara HDD nke ọzọ (ma ọ bụrụ na ọ bụkwa enweghị ike ọzọ ...).
Ụzọ kachasị mfe iji chọpụta ibu na diski n'oge ahụ bụ ịga na njikwa ọrụ (na Windows 7/8, pịa mkpọchi CNTRL + ALT + DEL ma ọ bụ CNTRL + SHIFT + ESC).
Windows 8. Download niile disks disks 1%.
Ibu na diski nwere ike "zoro ezo" usoro ị ga - ahụ na - enweghị njikwa ọrụ. Ana m akwado mmemme mmeghe ma hụ otú diski ga-esi akpa àgwà: ọ bụrụ na PC akwụsị ịkwụsịlata ma hapụzie ya, ị ga-ekpebi kpọmkwem ihe omume a na-egbochi ọrụ ahụ.
Ọtụtụ mgbe ndị a bụ: iyi, P2P mmemme (lee n'okpuru), mmemme maka iji vidiyo, antiviruses na ngwanrọ ndị ọzọ iji chebe PC site na nje na egwu.
Ebumnuche # 4 - iyi na P2P mmemme
Mmiri dị ugbu a na-ewu ewu na ọtụtụ ndị na-azụta ike mbanye dị n'èzí ka ha wee nweta ozi sitere na ha ozugbo. Enweghị ihe egwu na ebe a, mana enwere "nuance" - mgbe ọpụpụ HDD na-amalite ịda mbà n'oge ọrụ a: nbudata nbudata na-ada, ozi na-egosi na a na-agbanye disk ahụ.
A na-agbanye disk ahụ. Utorrent.
Iji zere njehie a, ma n'otu oge ahụ na-agba ọsọ ahụ, ịkwesịrị ịhazigharị usoro nbudata egwu (ma ọ bụ ihe ọ bụla P2P ngwa ị na-eji):
- mechie ọnụ ọgụgụ nke oge ebudatara iyi ka 1-2. Mbụ, ọsọ ọsọ ha ga-adị elu, nke abụọ, ibu dị na disk ahụ ga-adị ala;
- Mgbe ahụ ị ga-achọ ijide n'aka na ebudatara faịlụ nke otu iyi egwu (karịsịa ma ọ bụrụ na e nwere ọtụtụ n'ime ha).
Otu esi edozi iyi (Utorrent - ihe kachasị ewu ewu maka ịrụ ọrụ na ha), nke mere na ihe ọ bụla adịghị ala ala, nke a kọwara n'isiokwu a:
Ebumnuche # 5 - ike zuru oke, ọdụ ụgbọ mmiri
Ọ bụghị ike diski ọ bụla ga-enwe ike zuru oke n'ọdụ ụgbọ mmiri gị. Eziokwu bụ na diski dị iche dị iche iche na-arụ ọrụ na agba: a ghọtara diski ahụ ma ejiri ya na ị ga-ahụ faịlụ ahụ, ma mgbe ọ na-arụ ọrụ ya, ọ ga-akwụsị.
Site n'ụzọ, ọ bụrụ na ị jikọọ ụgbọala site na ọdụ ụgbọ mmiri sitere n'ihu panel nke usoro usoro, gbalịa na-ejikọta na ọdụ ụgbọ USB site na azụ nke unit. Oru mmiri na-arụ ọrụ nwere ike ọ gaghị ezuru gị mgbe ị na-ejikọta HDD nsonaazụ na netbooks na mbadamba.
Ma nke a bụ ihe kpatara ya ma dozie ugwo ndị ejikọtara na ike zuru ezu bụ nhọrọ abụọ:
- ịzụta "pigtail" pụrụ iche, nke otu aka jikọtara ọdụ ụgbọ USB abụọ nke PC gị (laptọọpụ), na njedebe nke ọzọ jikọọ na USB nke ụgbọala gị;
- USB USB na ike ọzọ dị. Nke a ka mma, n'ihi na Ị nwere ike jikọọ na ya ozugbo ọtụtụ disks ma ọ bụ ngwaọrụ ọ bụla.
USB USB na gbakwunye. Ike maka ijikọ ngwaọrụ iri na abụọ.
N'ihe nkowa banyere ihe ndia nile:
Ebumnuche # 6 - mbibi mmebi
O kwere omume na diski agaghị adị ogologo, karịsịa ma ọ bụrụ na, na mgbakwunye na brakes, ị na-ahụ ihe ndị a:
- diski kụrụ mgbe ị jikọtara ya na PC ma gbalịa ịgụ ozi sitere na ya;
- kọmputa na-efu mgbe ịnweta diski;
- ị nweghị ike ịlele diski maka njehie: mmemme dị iche iche;
- Ọkụ elekere adịghị ọkụ, ma ọ bụ na ọ dịghị ahụ anya na Windows OS (site n'ụzọ, na nke a, eriri nwere ike mebie).
O nwere ike ịbụ na ọpụpụ HDD nwere ike imebi ya (ọ bụ ezie na ọ nwere ike iyi ka ọ bụ obere ihe na gị). Cheta ma ọ bụrụ na ọ dabara adaba ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị tụkwasịrị ya ihe. Mụ onwe m nwere ahụmahụ dị mwute: otu obere akwụkwọ si na shelf gafere na diski mpụga. Ọ dị ka diski, ọ dịghị ọkpụkpụ ọ bụla, mgbawa, Windows na-ahụkwa ya, ọ bụ naanị mgbe ọ malitere ịkwasa ihe niile malitere ịkwado, diski malitere igwe, wdg. Kọmputa "eyịride" nanị mgbe a kwụsịrị diski ahụ n'ọdụ ụgbọ mmiri USB. Site n'ụzọ, ịlele Victoria si DOS adịghị enyere ma ...
Nke ahụ bụ maka taa. Echere m na ndụmọdụ ndị dị na isiokwu ahụ ga-enyere aka ma ọ dịkarịa ala ihe, n'ihi na disk diski bụ obi kọmputa!